Haintrano goavana… : kila, ravan’ny afo ny «Tsena Tsiafahy» Isotry | NewsMada
Haintrano goavana… : kila, ravan’ny afo ny «Tsena Tsiafahy» Isotry
Par Taratra sur 17/05/2016
Goavana ! Izay no azo ilazana ny haintrano nandrava sy nanapotika ny ”Tsena Tsiafahy”, etsy Isotry, ny marainan’ny alahadin’ny Pentekosta teo. An-tapitrisany maro ny tetibidin’ireo entana kilan’ny afo, tamin’ireo tsena mahatratra 350.
Naharitra adiny dimy mahery vao voafehin’ny mpamonjy voina ny afo nandritra ity fahamaizana teny Isotry ity. Nanomboka tamin’ny 12 ora alina ny firehetana izay tsy fantatra mazava ny niantombohan’ny afo fa niainga avy ao amin’ny toeram-pivarotana iray tao afovoany ary niitatra tamin’ireo trano fivarotana manodidina. “Tena tsy fantatra mihitsy ny niantombohan’ny afo fa nisy niantso tany an-trano izahay hoe may ny fivarotana no nahataitra anay. Avy any an-trano izahay no nihazakazaka namonjy taty am-pivarotana, saingy tsy nisy azo natao intsony satria ny entana efa kilan’ny afo”, hoy i Andrianasolo, mpivarotra kojakoja momba ny jiro sy rano.
Voalazan’ny lehiben’ny tsenan’i Tsiafahy Rakotonarivo Fréderic fa miisa 350 ireto tsena levon’ny afo ireto ary isan’ny nalaky nampiitatra ny afo ny fisian’ireo entana mora mirehitra amidy ao an-toerana, toy ny fantson-drano plastika, kojakoja maro samihafa momba ny jiro sy ny maro hafa.
Nijoalajoala tsy nisy toy izany, araka izany, ny afo. Niezaka ihany ireo mpivarotra nifanome tanana samy namoaka ny entana izay azo navoaka, saingy niitatra hatrany ny firehetana ka tsy afa-nanoatra intsony izy ireo. Fotoana fohy taorian’ny firehetana tonga teny an-toerana ny mpamonjy voina namono ny afo. Nanano sarotra ihany ny famonoana ny afo noho ny fijoalajoalany, teo koa ny fisian’ireo olona marobe tompon’entana sy ireo olon-kafa mpanararaotra. Saika niitatra tany amin’ireo trano hazo hafa fivarotana ny afo, saingy voafehy ihany. Trano lehibe iray teo akaiky teo no vaky fitaratra sy nitsonika ny fantsona teny amin’ny rindrin-trano noho ny hafanana nateraky ny firehetana. Notselaran’ny afo koa ny tranon-jiro iray ao anatin’ny tsena mitondra ny herinaratra ao Isotry.
Niatrana ny polisy…
Henjana ny fiambenana teny an-toerana, omaly halina satria nirangorango toy ny fanaony hatrany ireo mpanararaotra amin’ny fahavoazan’ny hafa toy izao. Tsy azon’iza na iza nidirana tao an-tsena afa-tsy ny mpamonjy voina ihany. Na izany aza, hatramin’ny omaly tolakandro nifanitsakitro ireo andian’olona nitsimpona ireo entana tsy levon’ny afo tao anaty lavenona, toy ny varahana sy ireo tapa-by samihafa. Misy kosa ireo olona mividy izany amina kilao mihitsy tsy lavitra teo.
Nanolotra vola 5 tapitrisa Ar sy tafo 250 ny filoha tamin’ny alalan’ny praiminisitra, omaly ihany. “ Tokony hijanona ny resaka politika amin’ny zavatra tahaka izao fa Malagasy no very fananana sy tra-pahavoazana. Tokony nihazakazaka ny rehetra mitondra ny anjara birikiny. Vonona hiara miasa amin’ny ben’ny Tanàna izahay ka tokony hatao tsena manara-penitra ny eto ho reharehan’Antananarivo”, hoy i Mahafaly Solonandrasana.
Efa teny an-toerana koa ny ben’ny Tanàna, mivady Ravalomanana Lalao nijery ifotony ny zava-misy ary nampanantena ny hitady vahaolana.